Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Victor Moses Child Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a football football onye kacha mara aha na aha njirimara; ''Moh'.
Ụdị ndụ anyị nke Victor Moses, gụnyere akụkọ nwata ya, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Nyocha nke akụkọ ihe mere eme na Nigerian Legend na nke gara aga Chelsea kpakpando gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Nke mbu, tupu anyi ebido, okwesiri ighota na akuko Victor Moses bu njem nke ihe mgbu, obi ike, ntachi obi, oru ike na oke ochicho. Ugbu a, ka anyị bido;
Akụkọ Victor Moses nke Victormụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Victor Moses na Disemba 12, 1990, na Lagos, Nigeria, nye nna ya, pastọ Austine Moses na nne, Oriakụ Josephine Moses (Ha abụọ Late).
Ndị mụrụ ya bụ ndị ozi ala ọzọ biri na Kaduna State, Nigeria. Ha mụrụ ya n’oge agadi ha.
Ha zụlitere Victor n'okwukwe Ndị Kraịst siri ike nke ghọrọ isi ihe na ndụ ya n'oge ọ na-etolite.
Ọ nọrọ n’oge ọ bụ nwata na-eso ma na-ekiri ndị mụrụ ya na-ekwusara igwe mmadụ ozi-ọma nke Chineke.
Pastọ na Oriakụ Moses etinyela uche na ndị otu Kraist bụ ndi so n'òtù ụmụ amaala na-akụ mkpụrụ ụka na Naịjirịa.
Ọnwụ Nne na Nna Victor Moses - Ọgba aghara Kaduna:
Pastọ Austin na Oriakụ Josephine Moses.
Ihụnanya Chineke kpaliri ije ozi ọma ha. Na Kaduna, ha kwusara ozi ọma ma na-egbo mkpa mmadụ n'enweghị ịkpa ókè.
Ha ghọtara ihe ize ndụ nke ime na ịgbasa okwukwe ha n'ebe ndị na-abụghị enyi.
Otú ọ dị, otu ihe edoghị anya. Ha amaghi na ha ga-anwu onwu ha ka ha na-arụ ọrụ nke onye ogbugbo idozi esemokwu dị n’etiti Ndị Kraịst na ndị Alakụba.
Nke a bụ ihe mere Kaduna Muslim/Christain Riot nke gburu ndụ ha n'afọ 2000.
Buru okwu banyere ogbagba Kaduna:
The Ngwongwo 2000 Kaduna ndị ọgba aghara okpukpe in Kaduna nke metụtara Ndị Kraist na ndị Alakụba maka iwebata iwu iwu na Kaduna State, Nigeria.
Ọgba aghara ahụ metụtara ọgụ siri ike n'etiti ndị Alakụba na ndị Kraịst nke bido na 21st February ruo 23 May 2000.
Edere ihe dị ka 5,000 ọnwụ. Pastọ Austin na Josephine Moses so na ndị nwụrụ anwụ.
Kedu ka afọ 2000 Kaduna Riot si malite:
Mgbe na February 2000, gọvanọ nke Kaduna kwupụtara iwebata ikpe iwu na steeti Kaduna, nke ndị na-abụghị ndị Alakụba mejupụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị bi na ya.
Alaka Kaduna nke Christian Association of Nigeria (CAN) haziri mkpesa ọha na eze megide ya na obodo Kaduna.
Ndị ntorobịa Alakụba lụsoro ha ọgụ, ọnọdụ wee daa nchịkwa, na-eme ihe ike na mbibi n'akụkụ abụọ.
Ime ihe ike mere na ebili mmiri abụọ (mgbe ụfọdụ a na-akpọ "Sharia 1" na "Sharia 2").
Oke mbu sitere na 21 rue 25 February, na ndi ozo gburu na March, na-esote uzo nke abuo site na 22 rue 23 Mee. Victor Moses nwụrụ nne na nna ya na mbido mbụ.
Victor Moses Biography - Na-agbanahụ ọnwụ ma ghọọ onye gbara ọsọ ndụ:
Nwa nwanyi Naijiria bụ 11 mgbe nne na nna ya gburu na ọgba aghara okpukpe. Ihe a jọgburu onwe ya mere n'afọ 2000, n'oge ọgba aghara ndị Alakụba na Ndị Kraịst na steeti Kaduna, Nigeria.
Ndị ntorobịa Muslim bụ ndị gburu ndị nne na nna Victor bụ ndị lekwasịrị anya dịka ndị isi nke mmegharị Ndị Kraịst na mpaghara ahụ.
N'ụzọ dị mma maka Victor, ọ nọghị n'ụlọ mgbe ihe ahụ merenụ. Ya na ndị ọgbọ ya na-egwu bọl na obodo dịpụrụ adịpụ. Jọ jidere ya mgbe ọ nụrụ ihe mere ndị mụrụ ya.
Ewezuga ihe ijuanya ahụ, a gwara Victor na ọ ga-abụ onye ọzọ. Enwere arịrịọ a iji kpochapụ ezinụlọ ya dum site n'aka ndị Alakụba a na-emebiga ihe ókè.
N’ịzaghachi iyi egwu a, ndị enyi Victor zobatara ya n’ebe nzuzo iji mee ka ọnọdụ ahụ dị jụụ. Nke a bụ otú o si bụrụ onye gbara ọsọ ndụ.
Victor Moses Bio - comingghọ onye na-achọ mgbaba:
Ọ bụ ihe gọọmentị Britain mere mere ka ọnọdụ dị jụụ na Kaduna. Ha tinyere aka site na ịnabata naanị mmadụ ole na ole gbara ọsọ ndụ si Kaduna.
A nabatara Victor Moses n'ihi na a maara na ndị mụrụ ya gburu mgbe ha na-arụ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge ọgba aghara ahụ.
Ben Chilwell Childhood Story Plus Na-agbagha Eziokwu
Mgbe ọdachi ahụ gasịrị, Victor kwagara United Kingdom wee chọọ mgbaba ebe ahụ. O nwere nwanne nna nna nke Nigeria nke kwadoro ya.
Otu ezinụlọ si South London nakweere ibu ọrụ nke ilekọta ya. Ọ bịarutere England mgbe ọ dị afọ 11.
Dị ka Victor Moses si kwuo, “England, lee ya anya elu elu dị ka eluigwe. Echere m na m nwere ike ịhụ ndị mụrụ m n’ebe ahụ. Ọ bụ ebe m na-amaghị. Ebe tere aka na Kaduna. Mgbe m rutere, amaghị m na ọ dịghị onye nọ ebe ahụ ”
Mgbe ọ nọ na London, nrọ ya ka ọ nọgide na-agba bọl ma ghọọ kpakpando football.
Victor Moses Untold Biography Eziokwu - comingghọ Onye Gbara Ọsọ Ndụ / Mgbapu achọ:
Nọ na Britain dị ka onye na-achọ mgbaba na-anabata Moses. Mgbe ọ bịarutere Britain, ọ gara Stanley Technical High School (nke a maara ugbu a dị ka Harris Academy) na South Norwood.
Victor Moses na ndị enyi ya na football na Harris Academy.
Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ gbara bọọlụ na klọb bọọlụ ụlọ akwụkwọ tupu Cosmos FC gụọ ya maka otu egwuregwu bọọlụ ntorobịa Tandridge.
Victor Moses Cosmos FC ID Kaadị.
Mgbe o nwesịrị ụfọdụ egwuregwu bọọlụ ntorobịa na mpaghara Tandridge nke dị na Cosmos 90FC, Crystal Palace bịakwutere ya ọbụlagodi mgbe ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Stadiumlọ egwuregwu Crystal Palace FC, Selhurst Park, dị nnọọ n'okporo ámá dịpụrụ adịpụ site na ụlọ akwụkwọ ya. Ọ na-egwuri egwu maka akụkụ ha na-erubeghị afọ 14.
Moses bu onye a ma ama na 14 mgbe o meriri ihe mgbaru ọsọ 100 maka Crystal Palace n'okpuru 14. O nyeere klọb aka imeri ọtụtụ iko. Na njedebe ikpeazụ, o meriri ihe mgbaru ọsọ ise ahụ niile megide Grimsby na ama egwuregwu Walkers, Leicester.
Victor Moses mgbe ọ dị afọ 14. Akụkọ na-enweghị atụ nke nwata.
Ọ dị naanị afọ iri na anọ n’oge ahụ. Onye njikwa mbụ ya, Tony Loizi, kọwara ya dị ka “Onye ọkpụkpọ ị nwere ike ịnweta site na otu n'ime nde ohere. Ọ dị ka Cristiano Ronaldo nke ọgbakọ " kwuru Loizi.
Victor Moses nwere oge echefu echefu na klọb. Otu n'ime ihe ndị dị otú ahụ na-agụnye oge mgbe o buru bọọlụ gbagoro onye nche, tinye bọọlụ n'ụkwụ ya, tụgharịa, gbachie ya n'isi wee tie ya ọzọ. Nwata ahụ nọ na-ebe akwa ka ọ na-eweda ya ala kpamkpam.
Dị ka Mozis si kwuo,
“Mgbe ahụ nne nwa ahụ bịara wee malite iji akpa akpa ya na-akụ m n’elu isi m. Ọ jụrụ m, gịnị kpatara m wedara nwa ya nwoke ala?…
Victor Moses Bio - Na-ewu ewu:
Mgbe Charles N'Zogbia na-apụ, a zụtara Moses wee bụrụ onye na-amalite mgbe niile maka Wigan na oge 2011-12.
Ọ pụtara ugboro 74 wee gbata ihe mgbaru ọsọ 8. Ọ bụ onye na-akwado ịlụ ọgụ nke Chelsea n'oge ọkọchị, na-esote Eden Hazard, Marko Marin na Oscar.
Victor Moses rutere na Chelsea FC.
Ọbịbịa ya na Chelsea gosipụtara ọkwa dị mkpa n'ọchịchọ ya iru ugwu egwuregwu ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere njem ya sara mbara site na omimi nke ọdachi onwe onye.
Victor Moses Biography - Ọ ka na-eru uju maka ndị mụrụ ya:
Victor Moses ka na-eru uju n'oge ole na ole, karịsịa mgbe ọ na-egwu egwu maka obodo ya, Nigeria.
Victor Moses ka na-eru uju banyere ndị mụrụ ya.
Ihe ncheta na-egbu mgbu nke Kaduna Riot, ọnwụ nne na nna ya na otu o si taa ahụhụ na-abịakwute ya mgbe ụfọdụ.
N'agbanyeghị na ndị mụrụ ya e gburu ndị Nigeria mgbe ọ dị afọ iri na ụma a nke 11years ochie, na egbochighị ya si aza ịhụ mba n'anya oku na chọrọ ịbanye na-egwu maka ya nna Nigeria.
N'ịbụ onye na-egwuri egwu maka otu ndị ntorobịa England ma bụrụ ndị a na-ahụ anya dị ka kpakpando na-abịa, ngwa Victor ka ịgbanwere obodo ya nwere ọtụtụ okwu na-abụkarị maka nkwenye England ịga n'ihu.
Ndi otu ochichi football, FIFA mechara nye ya nsogbu mgbe ha chịa ya otutu oge. Emechara ya kpochapụ maka Nigeria na November 2011.
Ọ mere ihe izizi ya na 6-1 nke Nigeria meriri Liberia na Calabar iji ruo eruo maka 2013 African Cup of Nations.
Ndụ Victor Moses:
Ndị nwere nkà a ma ama lụrụ ma gọzie ụmụ abụọ. Nke mbụ, Brentley Moses mụrụ na September 2012.
Brentley Moses - Victor Moses Nwa.
Victor Moses nwekwara nwa nwanyị, Nyah Moses, onye a mụrụ na February 2015.
Victor Moses ada-Nyah Moses.
Ọ na-ewere ụmụ ya dị ka ihe mara mma maka ya ma soro ha na-eme ememe ọṅụ ya mgbe niile.
Victor Moses nwere mmasị ime ka mmekọrịta mmekọrịta ya dị ala ma n'ihi nke a, ọ chọghị ikwu banyere ozi nkeonwe ya.
Ọ gwabeghị na ọ lụọla nwanyị ma ọ bụ na ọ lụghị? Victor emeghebeghịkwa ọnụ ya na ya na onye ọ bụla na-eme mkpapụ ma ọ bụ na ọ nweghị. Agbanyeghị, akụkọ na-egosi ọmarịcha enyi nwanyị a Jamaica dị n'okpuru ebe a bụ nne nke ụmụ ya.
Victor Moses Nwanyị na nwunye ka ha bụrụ.
Victor Moses Biography - Antonio Conte Mmetụta:
Antonio Conte meghere talent Victor Moses na Chelsea. Kemgbe ahụ, ụzọ ya ịghọ onye mmalite na-akpaghị aka na Stamford Bridge bịara kwụ ọtọ. Mwapụta ya na mberede bụ ihe Jose Mourinho akwa ụta.
Victor Moses- Site na Ahịhịa ruo Grace.
N'oge na-adịbeghị anya, Mozis abanyela akwụkwọ ọhụrụ iji mee ka ọ nọrọ n'ebe ọdịda anyanwụ London ruo 2021 nke a na-eche na ọ ga-efu ya na £ 100,000 kwa izu.
Oge 2016/2017 bụ n'ezie afọ ọganihu ya na Chelsea. Ndidi ya abụrụkwa nke abụọ. Dị ka Mozis si kwuo,
“Maka otu ọgbakọ nke ga-akpọta gị, ha ga-eji gị n'oge ụfọdụ. Amaara m na e nwere ọtụtụ ndị egwuregwu na Chelsea mana ọ bụrụ na m nweta ohere m, naanị m ga-ejide ya.
Ndụ Victor Moses nke Onwe:
Mozis na-eme ihere. Ọ na-amasị ya ikwu okwu n'olu dara ụda na nke dị ọcha nke Britain. Echiche ya na ịdị ike nke àgwà ya pụtara ìhè, ọ dịkwa mfe ijikọ ya na ụzọ o si nagide mmerụ ahụ nwata ya.
Ọ na-atụgharịkwa uche n'oge nwata ahụ mgbe ya na ndị enyi ya na-egwu bọọlụ na n'okporo ámá Kaduna ka dị ọhụrụ.
Enweghị m akpụkpọ ụkwụ. Naanị anyị gbara akpụkpọ ụkwụ na mgbe obere bọọlụ dara n'ụkwụ anyị wee bido ịkụ bọọlụ, ” echeta Moses
Victor Moses Untold Biography Eziokwu - Ndụ LifeBogger:
Nke a bụ Victor Moses LifeBogger Rankings dị ka enwetara n'ọtụtụ nyocha.